KMF/Cnoe: ”Hatsaraina ny lalàm-pifidianana” | NewsMada
KMF/Cnoe: ”Hatsaraina ny lalàm-pifidianana”
Par Taratra sur 31/07/2018
“Raha ny lalàm-pifidianana amin’izao fotoana izao no arahina, tsy fotoana tokony hiadian-kevitra momba ny fotoana mialoha ny fifidianana na ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izao. Aorian’izao fifidianana izao, tokony hisy ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana, ary tsy izay irery ny fanatsarana azo atao.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Raha hasiana fe-potoana ekena hanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana: hisy hametraka olana indray momba ny fotoana mialoha izany, na ny fotoana alohan’ny fotoana mialoha ny tena fampielezan-kevitra, araka ny fanazavany.
Ahoana àry ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana? Ho an’ny KMF/Cnoe: azo atao rehefa tsy voararan’ny lalàna. Rehefa tapitra ny fifidianana, mankany amin’ny fampandrosoana ny fifidianana: any amin’izay tsingerim-pifidianana izay no mitondra fanatsarana… Amin’izany no hijerena ny lesoka amin’ny fifidianana natao ary miainga avy amin’izay ny fanatsarana. “Tsy fahalemena akory ny fanekena hanao izay fanatsarana izay”, hoy izy.
Mila hajaina hatrany ny lalàna
“Raha ny sitraponay irery, tsy tokony hasiana fifehezana ny fampielezan-kevitra. Izany hoe: tsy ferena ny fampielezan-kevitra, manomboka ny 1 janoary hatramin’ny 31 desambra isan-taona. Fampielezan-kevitra hatrany isan-taona”, hoy ihany izy. Inona no tanjona raha tanteraka izay? Mba tena fampielezan-kevitra no atao, fa tsy fampielezam-bola, na “tee-shirt”, na kasikety, na fitaovana…
Na izany na tsy izany, miantso ny olom-pirenena rehetra amin’ny fanabeazana ataony hanaja lalàna ny KMF/Cnoe. Ny lalàna no maha firenena ny firenena, ny lalàna no ahazoana mandrindra ny fiarahamonina. Manamafy antso ho an’ny mpitondra izy fa tsy fahalemena velively ny fanekena hanatsara lalàna, ny mifanohitra amin’izany aza: vao mainka mampitombo ny fandraisana andraikitra ho fanasoavana ny firenena.